Tahirin-drakitra | December 2019
Hamafiso ny fampiharana fangatahana Launcher.exe
Launcher.exe dia iray amin'ireo tahiry azo atao ary natao hametrahana programa. Matetika ny mpampiasa dia manana olana amin'ny rakitra amin'ny format EXE, ary mety hisy antony maromaro amin'izany. Avy eo, mamakafaka ireo olana lehibe izay mitarika amin'ny fahadisoana amin'ny fampiharana Launcher.exe ary mandinika ny fomba fanitsiana azy ireo.
Sokafy ny format FLV
Ny format FLV (Flash Video) dia fitahirizana media, voalohany indrindra natao hijerena horonantsary mivantana amin'ny alalan'ny navigateur. Na izany aza, misy programa maro ankehitriny izay ahafahanao maka horonantsary toy izany amin'ny ordinatera. Amin'izany fifandraisana izany, ny olana momba ny fijerena azy eo an-toerana miaraka amin'ny fanampian'ny mpilalao horonantsary sy ny fampiharana hafa dia lasa manan-danja.
Sokafy ny rakitra format WLMP
Ny rakitra miaraka amin'ny extension WLMP dia ny angon-dahatsary amin'ny alàlan'ny tetikasa fanoratana video natao tamin'ny Windows Live Movie Studio. Anio dia tianay ny hilaza aminao ny format sy ny manokatra azy. Ahoana no hanokafana rakitra WLMP Raha ny marina, ny rakitra iray manana alalana ity dia tahirin-kevitra XML izay mitahiry ny mombamomba ny rafitry ny horonantsary noforonina ao amin'ny Windows Live Studio.
Sokafy ny sarin'ny JPG
Angamba ny format tena mahazatra indrindra dia ny JPG, izay nalaza noho ny fifandanjana tsara indrindra teo amin'ny ambaratongan'ny angon-drakitra sy ny kalitao. Andeha hojerentsika izay vahaolana rindrambaiko azo ampiasaina mba hijerena sary miaraka amin'ity fanitarana ity. Software ho an'ny JPG Tahaka ny endrika hafa rehetra, JPG dia azo jerena miaraka amin'ny fanampiana manokana ampiasaina amin'ny fiasana amin'ny sary.
Ahoana no hanokafana aspx
Ny extension of .aspx dia tranonkala ho an'ny tranonkala izay novolavola mampiasa teknolojia ASP.NET. Ny toetra mampiavaka azy dia ny fisian'ny tranonkala ao amin'izy ireo, ohatra, ny famenoana latabatra. Sokafy ny format. Amin'ny antsipiriany bebe kokoa dia diniho ireo programa izay manokatra pejy miaraka amin'ity extension ity.
VHD ny rakitra
Indraindray rehefa mampiasa PC, dia mety ilaina ny fametrahana rafitra fiasa misahana ny OS eo ambany. Ny rakitra virtoaly voavonjy ao amin'ny VHD dia ahafahanao manao izany. Androany dia hiresaka ny fomba hanokafana ireo karazan-drakitra ireo isika. Ny fisokafan'ny VHD-drakitra VHD, izay voafetra ho "Virtual Hard Disk", dia natao hananganana tahiry OS, programa ary tahiry maro hafa.
Adikao ny DOC ho PDF
Ny iray amin'ireo endrika format malaza amin'ny rakitra elektronika dia DOC sy PDF. Andeha hojerentsika ny fomba ahafahanao manova ny rakitra DOC ho PDF. Fomba fampiovana Afaka mamadika DOC ho PDF ianao, na mampiasa rindrambaiko miasa miaraka amin'ny format DOC, ary mampiasa rindrambaiko manokana.
Ahoana no hanokafana ny dikantsoratra ao amin'ny format SRT
SRT (Fehezanteny SubRip Subtitle) - endrika format an-tsoratra izay misy tahirin-kevitra amin'ny lahatsary. Amin'ny ankapobeny, ireo fizarana ireo dia zaraina amin'ny lahatsary ary ahitana lahatsoratra izay manondro ny vanim-potoana izay tokony hiseho eo amin'ny efijery. Misy fomba hijerena dikanteny tsy misy milalao ny horonantsary?
Hanova horonan-tsary avy amin'ny format H.264 mankany AVI
Ny rakitra misy ny extension H.264 dia lahatsary. Ny manokatra azy ireo amin'ny ordinatera dia tsy sarotra, fa ny format tena dia tsy dia tsara loatra amin'ny fampiasana isan'andro. Ny vahaolana tsara indrindra amin'ity toe-javatra ity dia ny hivadika ho AVI bebe kokoa. Jereo koa: Ahoana ny fomba hanokafana H.264-video H Conversion Methods.
Mamadika ny rakitra CDR mankany AI
Ny antontan-taratasy CDR noforonin'i CorelDraw amin'ny dikan-teny iray manokana dia tsy natao ho an'ny fampiasana betsaka noho ny famelana formata voafetra. Vokatr'izany, mety ilaina ny miova amin'ny fanitarana hafa mitovy amin'izany, anisan'izany ny AI. Aorian'izay dia heverintsika ny fomba tsara indrindra hampivoarana rakitra toy izany.
Ny mpampiasa mavitrika ao amin'ny Windows OS dia matetika mifandray amin'ny rakitra DMP, noho izany dia anio dia tiantsika hampidirina amin'ny fampiharana izay afaka manokatra tahiry tahaka izany. Safidy amin'ny fanokafana DMP Ny fametahana DMP dia natokana ho an'ny rakitra fandefasana fahatsiarovan-drakitra: snapshots of ny fanjakana RAM amin'ny fotoana iray amin'ny fiasan'ny rafitra na fampiharana manokana izay ilain'ny mpandrindra mila fialana bebe kokoa.
Sokafy ny format KMZ
Ny rakitra KMZ dia mirakitra tahirin-kevitra momba ny angona, toy ny toerana misy azy, ary ampiasaina indrindra amin'ny fampiharana ny fampiharana. Matetika ny fampahalalana toy izany dia azo zaraina amin'ny mpampiasa manerana izao tontolo izao ary koa ny olana momba ny fanokafana ity format ity dia ilaina. Fomba, amin'ity lahatsoratra ity, dia handinika amin'ny antsipirihany ireo fangatahana ho an'ny Windows izay manohana ny fiasan'ny KMZ.
Amboary ny PNG amin'ny PDF
Ny fampitomboan'ny PNG amin'ny famahanana rakitsary dia ampiasaina betsaka amin'ny fanaovana pirinty. Matetika dia ilaina ny manolotra ny sary ho PDF ho an'ny famindrana taty aoriana. Ankoatra izany, ny fitaovana ampiasaina amin'ny orinasa fanontam-pirinty, dia mifantoka amin'ny asa mahazatra miaraka amin'ny antontan-taratasy elektronika amin'ny endrika PDF.
Amboary ny format audio ho an'ny MP3 ho an'ny MP3
Ny rakitra miaraka amin'ny fanitarana M4B dia endrika miavaka noforonina manokana ho an'ny famahanana audiobooks misokatra amin'ny fitaovana Apple. Hodinihintsika amin'ny manaraka indray ny fomba fampivoarana ny M4B amin'ny endrika format malaza kokoa. Ny famadihana ny rakitra M4B ho an'ny MP3 Audio amin'ny fampitomboan'ny M4B dia mifandray amin'ny format M4A amin'ny fomba fampihetsiketsehana sy fihainoana fihenam-bidy.
Sokafy ny rakitra tmp
Ny TMP (temporary) dia tahiry vonjimaika izay mamorona karazana programa samihafa: sehatr'asa sy tabilao, tabilao, rafitra opera, sns. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ireo zavatra ireo dia voavaha indray rehefa avy mamonjy ny valin'ny asa sy ny fanakatonana ny fangatahana. Ny singa iray ivelany dia ny fitahirizana tranonkala (mazava ho azy fa feno ny habetsahana voafaritra), ary koa ireo tahiry izay mitoetra noho ny tsy fahampian'ny famaranana programa.
Manonta bokotra DjVu
Boky maro sy antontan-taratasy isan-karazany nozaraina amin'ny endrika DjVu. Amin'ny tranga sasany dia mety mila manonta toy izany ianao, satria androany dia hampahafantarintsika ny vahaolana tsara indrindra amin'ity olana ity. Ny fomba fanontana DjVu Ny fandaharam-pampianarana maro indrindra izay afaka manokatra tahirin-kevitra toy izany dia ahitana ny fitaovana fanontana azy ireo amin'ny solo-sainy.
Ampitombo ny volan'ny rakitra MP3
Na dia eo aza ny lazan'ny fizaràna mozika an-tserasera, maro ireo mpampiasa dia manohy mihaino ny lahatsorany indrindra amin'ny fomba efa tranainy - amin'ny famoahana azy ireo amin'ny finday, amin'ny mpilalao iray na amin'ny sarimihetsika sarimihetsika PC. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny rakitsoratra dia zaraina amin'ny format MP3, anisan'izany ny tsy fahampian'ny tsy fahampian-tsakafo: indraindray ny feo dia mangina loatra.
Sokafy ny format MHT
MHT (na MHTML) dia tranonkala ho an'ny tranonkala voatahiry. Ity tetikasa ity dia miforona amin'ny alàlan'ny fananganana pejy ao amin'ny tranonkalan'ny solosaina. Ho takatsika izay fampiharana azonao atao MHT. Ny programa hiasa amin'ny MHT Browsers dia natao voalohany indrindra hanodinana ny format MHT. Saingy, indrisy fa tsy ny tranonkala browse rehetra afaka maneho zavatra miaraka amin'ity fanitarana ity amin'ny fampiasana ny fepetra mahazatra azy.
Ahoana no hanokafana rakitra format BUP
Ny BUP dia natao hamoronana fanazavana momba ny menus DVD, ny toko, ny lalan-kely ary ny dikanteny ao amin'ny tahiry IFO. Izy io dia an'ny endrika DVD-Video ary miasa miaraka amin'ny VOB sy VRO. Indraindray hita ao amin'ny lahatahiry "VIDEO_TS". Azo ampiasaina fa tsy IFO raha toa ka simba ilay farany.
Amin'izao fotoana izao dia maro ny ordinatera efa manana fiara sarotra miala amin'ny haben'ny gigabytes an-jatony mankany amin'ny tebitety marobe. Saingy, mbola mijanona ho mendrika avokoa ny megabyte rehetra, indrindra fa rehefa mivoaka haingana amin'ny solosaina hafa na amin'ny Internet. Noho izany, matetika dia ilaina ny mampihena ny haben'ireo rakitra mba hahatonga azy ireo ho sarotra kokoa.
https://termotools.com mg.termotools.com © Tahirin-drakitra 2019